United IDI-Mardi and R.B. Hydropower Limited(United IDI-Mardi and R.B. Hydropower Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
युनाइटेड इदी–मर्दीको सेयर कारोबार खुल्यो, पहिलो दिनै पोजेटिभ सर्किट
काठमाण्डौ । भर्खर आईपीओ निष्कासन गरेको युनाइटेड इदी–मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर आज आइतबारबाट धितोपत्र दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार खुलेको छ। आज स्पेसल प्रिसेनमा यो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २९६ रुपैयाँमा कारोबार भएसँगै आजबाट नियमित समय (बिहान ११–दिउँसो ३ बजे) सम्मको कारोबार खुलेको हो। नेप्सेले यो कम्पनीलाई...
धितोपत्र बजारमा आजबाट युनाइटेड इदी–मर्दीको सेयर कारोबारमा आउने
काठमाण्डौ । भर्खर आईपीओ निष्कासन गरेको युनाइटेड इदी–मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर आज आइतबारबाट धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने भएको छ। नेप्सेले यो कम्पनीलाई कारोबार 'यूएमआरएच' कोड प्रदान गरेको छ भने आज हुने पहिलो कारोबारका लागि ९८.७९ रुपैयाँदेखि २९६.३७ रुपैयाँसम्म ओपनिङ रेन्ज तोकेको छ। यो रेन्जभित्र स्पेसल...
युनाइटेड इदी–मर्दीको सेयर आइतबारबाट कारोबारमा आउने, कति पायो ओपनिङ रेन्ज ?
काठमाण्डौ । भर्खर आईपीओ निष्कासन गरेको युनाइटेड इदी–मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर आइतबारबाट धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने भएको छ। नेप्सेले यो कम्पनीलाई कारोबार यूएमआरएच कोड प्रदान गरेको छ भने आइतबार हुने पहिलो कारोबारका लागि ९८.७९ रुपैयाँदेखि २९६.३७ रुपैयाँसम्म ओपनिङ रेन्ज तोकेको छ। यो रेन्जभित्र स्पेसल...
काठमाण्डौ । युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ । बाँडफाँडको केही समयपछि रिजल्ट समेत प्रकाशित भएको छ । आइपीओको रिजल्ट बिजशालाको यो लिंकमा गएर आइपीओ निश्कासन गर्ने कम्पनीको नाम र आफ्नो डिम्याट खाता नम्बर प्रविष्ट गरी परे नपरेको थाहा पाउन सकिन्छ । आज अपरान्ह ४ बजे निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक...
काठमाण्डौ । युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ । केहीबेरअघि निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलमा एक कार्यक्रमका बीच आइपीओ बाँडफाँड भएको हो। युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आइपीओमा करिब साढे ५ लाख आवेदन परेको थियो । सेयर निष्कासनकर्ता तथा बिक्री...
युनाइटेड इदी–मर्दीको आईपीओमा आवेदन दिन आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । युनाइटेड इदी–मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निष्कासन गरेको आईपीओपमा आवेदन दिने आज आइतबार अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले गत मंसिर ३ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ८ लाख ७३ हजार ९१० कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। उक्त आईपीओमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई...
आजदेखि युनाइटेड इदी–मर्दीको आइपीओ, कति दिने आवेदन ?
काठमाण्डौ । युनाइटेड इदी–मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्राथमिक सेयर बुधबार(आज)देखि निष्कासन भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ८ लाख ७३ हजार ९१० कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । निष्कासन गरिने कुल सेयर संख्यामध्ये ४३ हजार ६९६ कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुमा बाँडफाँड गरिएको छ भने १७ हजार ४७८...
भोलिदेखि युनाइटेड इदी–मर्दीको आईपीओ निष्कासन हुने, कति कित्तासम्म आवेदन दिने ?
काठमाण्डौ । युनाइटेड इदी–मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्राथमिक सेयर निष्कासन भोलि बुधबारदेखि हुने भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ८ लाख ७३ हजार ९१० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। निष्कासन गरिने कुल सेयर संख्यामध्ये ४३ हजार ६९६ कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुमा बाँडफाँड गरिएको छ भने १७ हजार...
धितोपत्र बोर्डको निर्देशनपछि युनाइटेड इदी–मर्दीको आईपीओ निष्कासन मिति सर्यो, अब कहिले ?
काठमाण्डौ। युनाइटेड इदी–मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडले दोस्रो चरणमा सार्वसाधारणका लागि बिक्री गर्न लागेको रु. ८.७३ करोडबराबरको आईपीओको निष्कासन मिति सरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनपछि कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको मिति सारेको हो। अब कम्पनीको यो आईपीओ मंसिर ३ गते निष्कासन हुनेछ। यसअघि कम्पनीको यो दोस्रो चरणको आईपीओ...
कात्तिक २७ बाट युनाइटेड इदी–मर्दीले रु. ८.७३ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाण्डौ । युनाइटेड इदी–मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडले दोस्रो चरणमा कात्तिक २७ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि ८.७३ करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ८ लाख ७३ हजार ९१० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यसअघि पहिलो चरणमा कम्पनीले उद्योग...